I-Scenic Manison eneSauna kufuphi ne-Ski Area eCarinthia
USusan - BELVILLA unezimvo eziyi-3330 zezinye iindawo.
Le ndlu inkulu ibekwe eHermagor-Pressegger See. Kukho amagumbi amabini okulala kwaye igumbi lokuhlala linebhedi yesofa. Bebonke abantu abahlanu abanokuhlala apha kweli khaya lilungele iholide nosapho. Ukongeza, unokuthatha ubuninzi besilwanyana esi-1. Le ndlu ijikelezwe ziintaba ezintle.
Indlu ikwindawo ezolileyo kufutshane nePresseggersee. Uhamba ehlathini ukuze ujabulele indawo entle. Ehlotyeni, i-rafting, i-tobogganing, ukuhamba ngebhayisikili entabeni kwaye kunjalo kwi-Adventure Park e-Presseggersee. Uhambo oluya eItali naseSlovenia lunokwenzeka, kodwa iVenice ziiyure ezimbini ngemoto. Abathandi be-Skiing banokundwendwela indawo ye-ski eNassfeld kwi-15 km. Ebusika ibhasi yokutyibilika imisa kumgama ozimitha ezingama-200 kuphela ukusuka kwindlu.
Indlu enkulu ikhululekile kwaye ixhotyiswe kakuhle. Isithando somlilo siphakathi kwezinye izinto ezixhotyiswe nge-oven okanye i-dishwasher. Kukho igadi enkulu enebarbecue owabelana ngayo nezinye iindwendwe.
Kukho indawo yokupaka iimoto ezi-2 ubuninzi kule ndlu.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ipaseji)
Kumgangatho woku-1: (Igumbi lokuhlala(ibhedi yesofa enye, iTV(isathelayithi), isitovu), Ikhitshi(i-oveni(izitovu ezi-4), i-oveni,imicrowave,umatshini wokuhlamba izitya, ifriji-ifriji), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(elinye ibhedi, ibhedi yebhedi), igumbi lokuhlambela)
Indawo engaphantsi: (sauna(kwabelwana nezinye iindwendwe, kuhlawulwe))
carport, zokufudumeza(central), igadi(kwabelwana nezinye iindwendwe), ifenitshala yegadi, BBQ
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Presseggersee